शास्वत धाममा सेल्फी (फोटोफिचर) - Postmandu
शास्वत धाममा सेल्फी (फोटोफिचर)
2020-02-04 2020-02-13 PostmanduLeaveaComment on शास्वत धाममा सेल्फी (फोटोफिचर)
नवलपुर । धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व बोकेको नवलपरासीमा रहेका विभिन्न धार्मिक स्थलमध्ये शास्वत धामको निकै चर्चा हुने गरेको छ ।
जिल्लामा रामग्राम स्तुप, त्रिवेणी धाम, मदारबाबा, पण्डितपुर मुख्य धार्मिक एतिहासिक स्थल भएपनि आवश्यक पुर्वाधार विकास र संरक्षण अभावमा ति स्थान ओझेलमा परेका छन् ।
शास्वत धाम पछिल्लो समय मुख्य आकर्षणको रुपमा चिनिएको छ । जसको सौन्दर्यता र महत्वका कारण विदेशमा समेत चिरपरिचित बन्दै गएको छ ।
सनातन धर्मको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नवलपरासीमा सिंगारिएको शास्वत धाममा दिनहुँ ५ हजार पर्यटकहरु भ्रमण अवलोकन गर्ने गरेका छन् ।
शास्वत धामको महत्व बुझ्न र भ्रमण अवलोकन गर्न नेपाल भारतसहित विभिन्न देशका पर्यटकहरु आउने गरेका छन् । नेपालकै गौरवको रुपमा रहेको शास्वत धाममा दिनहुँ पर्यटक तथा भक्तजनहरुको घुईचो लाग्ने गरेको छ ।
नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका २ स्थित दुम्कौलीमा चौधरी गु्रपद्धारा ८० विगाहा क्षेत्रफलमा स्थापित सिजी ईण्डस्ट्रियल पार्क परिसरभित्र ७ विगाहा क्षेत्रफलमा शास्वत धाम निर्माण गरिएको छ । चौधरी फाउण्डेशले सन् २००३ सालमा सुभारम्भ गरेको यो धाम निर्माण गर्न १४ वर्ष लागेको थियो ।
७ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त धामको मध्य भागमा खजुरावान शैलीमा बुट्टेदार तथा अत्यन्तै मनमोहक मन्दिर ‘अम्केश्वर शिव मन्दिर‘ को निर्माण गरिएको छ जुन नेपालकै नमुना र यस धामको मुख्य आकर्षण रहेको बताइएको छ । खजुरावान शैली दक्षिण भारतको प्रचलित शैली हो ।
मुख्य आकर्षणको रुपमा रहेको अम्केश्वर मन्दिरलाई चारैतिरबाट सर्वतिर्थ सरोबर तालले घरिएको छ । तालमा बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपति, मुक्तिनाथ, हरिद्धारको जल मिसाई तालको महत्वलाई बुलन्द गरिएको छ । धाममा १२ राशी र २७ नक्षत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरि वरपिपल, अशोक र सल्ला लगायतका रुखहरु लगाइएको छ ।
अम्केश्वर मन्दिरको सुन्दरता बढाउन विभिन्न प्रसिद्ध मठमन्दिरहरुको नक्सामा ढाल्दै मन्दिरमा हस्तकलात्म बुट्टाहरु भरिएको छ जुन बुट्टा सिमेन्टेड भएपनि झट्ट हेर्दा काठबाट बनेको जस्तो अनुभव हुन्छ ।
मन्दिरभित्र विभिन्न १६ देवीदेवताको आकर्षक मुर्तिहरु राखिएका छन् । मन्दिरको तल धार्मिक संग्राहालय बनाइएको छ जसले पर्यटकहरुलाई झनै लोभ्याउने गरेको छ ।
मन्दिरसँग जोडिएको तालको चारै कुनामा पानीको फोहोरा र विभिन्न कलरको लाईट जोडिएको छ जसले रातीमा मन्दिरको झनै सुन्दरता बढाउने छ ।
देवचुली र वरचुली पहाडको काखमा रहेकाले पनि यस धाममा प्राकृति सौन्दर्य थपिदो आकर्षण बढेको छ ।
पर्यटक र भक्तजनहरुलाई आकर्षण गर्न धाममा अम्केश्वर मन्दिर अलावा अखण्ड अग्नीकुण्ड, काली कुण्ड, बुद्ध कुण्ड, यज्ञ कुण्ड, शक्तिघाट, हनुमान मन्दिर, धार्मिक संगाहालय, धार्मिक प्रदर्शनी, डिजिटल धार्मिक पुस्तकालय, गुरुकुल आश्रम, हेरिटेज बिल्डिङ्ग हल, गौशाला, धर्मशाला, शुद्ध साकाहारी भोजनालय र सुन्दर व्यस्थित पार्क समेतको निर्माण गरिएको छ ।
Tagged VISIT NEPAL 2020
इन्साइट भिजनले जित्यो इन्टर प्लस टू फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि
प्रचण्ड किन जाँदैछन् अमेरिका ?
2019-03-17 2019-03-18 Postmandu
कालिञ्चोकमा हिउँको मज्जा ! १८ तस्विरमा हेर्नुहोस्
2019-01-28 2019-02-02 Postmandu